Voasakana ve ny blog-city tany Shina ? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Novambra 2018 3:59 GMT
Hatramin'ny omaly tolakandro, nanomboka nosakanana tany Shina ny blog-city, BSP malaza. Mbola eo ambany fanivanan'ny GFW (Manda Aroafo Lehibe) izy ankehitriny, ilay tetikasa hamantarana ireo teny lehibe sy manakana tranonkala. Mbola hita any amin'ny tanibe Shina ny blog-city rehefa mampiasa ny proxy .
Nitatitra tao amin'ny bilaoginy izay miantrano ao amin'ny blog-city i Anti, bilaogera fanta-daza iray izay sady mpanao gazety tranainy ihany koa ho an'ny vaovao iraisam-pirenena fa raha vao namoaka ny hetsi-panoherana tao amin'ny China Youth Daily izy dia nanomboka tsy azo nidirana ny bilaoginy. Namahana bilaogy momba ny hadisoan'ny governemanta hatramin'ny ela i Anti. Maro ny bilaogera Shinoa noho izany no tsy dia gaga nahita ny bilaoginy sy ny blog-city voasakana. Ankehitriny izy dia nifindra nankany amin'ny bilaoginy fiandry tao amin'ny MSN Space.
Manantena i Gordon, izay miara-miasa amin'ny ekipa mpanohana ny blog-city, fa tsy haharitra ela ity fanakanana ity. Nanasa ireo bilaogera Blog City hafa ao Shina ihany koa izy mba hifandray aminy (amin'ny alàlan'ny Imagethief sy The Peking Duck ). Nilaza izy fa miasa mba hahitana vahaolana ny ekipan'ny bilaogy.
Niatrika olana lehibe mikasika ny toerana ahafahana mibilaogy ny bilaogera Shinoa, indrindra ireo izay te-haneho hevitra malalaka. Mihabetsaka hatrany no voasakana ny BSP vahiny hafa, toy ny Blogsome, Typepad ary Blogspot. Saika ny BSP rehetra ao amin'ny Tanibe Shina no manana rafitra henjana manivana ny “teny ratsy” izay heverina ho ara-politika na saropady ara-pôrnôgrafia. Mila manoratra ny mombamomba azy manokana ny bilaogera raha miantrano ao amin'ny sehatra lohamilina tsy miankina. Ho an'ireo bilaogera izay te-hibilaogy malalaka sy azo antoka dia afaka mampiasa ny programa “Adoptablog” izy ireo.
Mihitatra ny Rindrina Aro-afo. Iza no ho manaraka?